Taariikh nololeedka Sheekh Cumar-Faaruuq | Somali Wiki
Home / Aqoonyahan / Taariikh nololeedka Sheekh Cumar-Faaruuq
Posted by: somaliwi in Aqoonyahan, Diinta January 17, 2017	Comments Off on Taariikh nololeedka Sheekh Cumar-Faaruuq 961 Views
Sheekh Cumar Faaruuq Xaaji Cabdi-Suldaan Xaaji Maxamuud wuxuu ku dhashay degmada Qooxley oo Qallaafe iyo Qabridaharre u dhaxeysa, halkaasi oo magaceeda caanka ahi yahay “Carmaale” . Carmaale waxaa dariiqa diimeed ka hayey aabihiis Xaaji Cabdi-Suldaan, dariiqadaasoo ka koobanayd dugsi Quraan iyo barida diinta islaamka oo uu hayey Sheekh waalid u ahaa Sheekh Cumar Faaruuq oo la oran jirey macallin Cusmaan Macallin Dhicis.
Dabadeed Cumar-Faaruuq wuxuu galey madrassa ku taalley Xamar oo la oran jirey “Machadu-Diin bil-Muqdisho” oo ay Masaaridu dhigi jirtey. Halkaasi waxa uu ku dhameeyay dugsiga dhexe. Dugsiga sare waxa uu ku dhameeyay Machad-Altadaamun al Islaamiyah bil-Muqdisho oo ku oolli jirey lambar afar oo ay sucuudigu maamuli jireen. Sheekh Cumar Faaruuq marwalba wuxuu ahaa qof jecel kororsiga khayrka wuxuuna rumaysnaa arwalba in cilmiga aan laga dhargi Karin. Waxa uu aaday boqortoyada wadanka Sacuudiga waxa uuna galay “Jaamacadda Medina Almunawarah” kulliyadda”Al-Dacwa Wa-usuula-Diini”, markaasoo taariikhdu ahayd 1975, wuxuuna ka qalin-jabiyey 1979kii.
Kutubadaas uu Sheekh Cumar duubay ayaa gaarey meelwalba oo dunida. Waxaana yar qooys Soomaaliyeed oon haysan cajaladaha Tafsiirka Quraanka Kariimka ee Sheekh Cumar Faaruuq. Mudooyinkii danbena waxaa la sameeyay Maktabado loo bixiyay “Maktabadii Sheekh Cumar Faaruuq” si loogu xasuusto Sheekha marwalba in uu ahaa qof u istaagan barida diinta islmaamka. Kutubtaas dartood baa dadkii ku noolaa dibedda ay jecleysteen inay arkaan, markaasoo uu 1993kii bishii July 12keedii uu Shiikhu tegay dalalka Sweden, Norwey, Danmark, Finland, Swizarland, Ingiriiska oo uu ka sameeyay muxaadaraad iyo duruus kaleba. Kadib sannadkii 1996 ayuu ku noqday Soomaaliya, waxaanu tagey magaalooyinka Muqdisho, Marka, Qoryaaley, Afgooye, Wallaweyn, Buurhakaba, Beydhabo.
Mudooyinkii danbe ayaa Sheekh Cumar Faaruuq Xaaji Cabdisultaan waxaa hayay xanuunyo farabadan oo runtii ka reebay in uu guto fidinta dacwada islaamka iyo barida diinta. Ahelkiisa waxay sheegeen in mudooyinkii danbe uu Sheekh Cumar Faaruuq asaga oo da’ ah hadana marwalba uu ka murugsanaa xaalka iyo dhibaatada ka taagan wadankii hooyo ee “Soomaaliya”. Marwalba wuxuu rajeeynayay in uu arko ummada Soomaaliyeed oo u dhalatay doowlad caadil ah oo isu keenta ummada Soomaaliyeed. Ilaahay ma qadrin in uu Sheekh Cumar indhihiisa ku arko. Taariikhdu markay ahayd 08.03.2011, Maalin Talaado ah Saacadu, barqin 11AM magaalada Jeddah ee boqortooyada Sacuudiga ayaa Sheekh Cumar Faaruuq ay u timid tii ilaahay. Waana xaq sida ilaahay noo sheegay in nafwalba ay geeri dhadhamindoonto.”كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ
Previous: Danjire Daahir Maxamuud Geele: Aqoon & Deganaan
Next: Taariikh nololeedkii Cabdiraxman Tuur